Umsebenzi we-Oscar De La Hoya Ukulwa-ngokulwa
"I-Golden Boy" yafumana amanqaku angama-30 ekukhankanyeni kwimiba yakhe engama-16
U-Oscar De La Hoya, okhuphisana njengomgcini webhokisi oqeqeshiweyo ukususela ngo-1992 ukuya ku-2008, wayenomsebenzi wokubaluleka wokukhumbula, ukuthatha izihloko zehlabathi kwiiklasi ezinzima. Wayethatha umhlala-phantsi kunye neengxelo ze-39 eziphambili-kuquka i-KO ezingama-30-ngokubhekiselele kwiilahleko ezi-6 kwaye yayiyinxalenye yeyona mininzi yemali ye-bonanzas yokuhlawula nganye. Ngaphantsi kukhangele ngokupheleleyo kwi-career yakhe yokulwa nomsebenzi.
I-1990s - Iintlawulo zeMatyala
U-De La Hoya waphendukela kwangaphambili kwiminyaka elishumi emva kweminyaka yokuphumelela njengomtsalane, apho waqokelela iirekhodi ze-223 iinsapho, kuquka i-K3 163 ezimangalisayo, ngokubhekiselele kwiintlawulo ezihlanu kuphela.
Emva kokuba anqobe indondo yegolide kwiimidlalo zeOlimpiki ze-1992 e-Barcelona, ​​"i-Golden Boy" yathatha isihloko sayo sokuqala sehlabathi njengeminyaka emibili emva koko.
NgoNovemba 23 - Lamar Williams, Inglewood, California, KO 1
Ngomhla wama-12 - u-Cliff Hicks, i-Phoenix, iArizona, i-KO 1
Jan. 3 - eParis Alexander, Hollywood, California, TKO 2
Feb. 6 - Curtis Strong, eSan Diego, eCalifornia, TKO 4
NgoMatshi 13 - uJee Mayweather, Las Vegas, Nevada, TKO 4
NgoMatshi 6 - uMike Grable, eRochester, eNew York, W 8
Ngo-Meyi 8 - u-Frank Avelar, iLake Tahoe, i-Nevada, iTKO 4
Juni 7 - UTroy Dorsey, eLas Vegas, iTKO 1
Agasti 14 - Renaldo Carter, Bay St. Louis, Mississippi, KO 6
Agasti 27 - uAngel Nunez, iBeverly Hills, iTKO 4
Oktobha 30 - Narcisco Valenzuela, Phoenix, KO 1
U-De La Hoya uzuze isihloko se-World Boxing Organisation esiphezulu se-featherweight ngesihloko ngo-Matshi, sigcina ibhande ngokugxotha iGiorgio Campenella ngokulandelelana kweMeyi kuphela, waza wabuyisa umxholo we-WBO wokukhanya ngokulula ngoJulayi.
Wazikhusela ngokuphindaphindiweyo kwesiqendu kabini kunyaka, ekhupha uCarl Griffith kwiintlobo ezintathu ngoNovemba aze anqobe uJohn Avila ngoqhagamshelwano lobugcisa ngoDisemba.
NgoMatshi 5 - uJimmi Bredahl, eLos Angeles, iTKO 10
NgoMeyi 27 - iGiorgio Campanella, eLas Vegas, KO 3
Julayi 29 - uJorge Paez, eLas Vegas, KO 2
NgoNovemba 18 - uCarl Griffith, eLas Vegas, KO 3
Ngomhla wama-10 - uJohn Avila, eLos Angeles, iTKO 9
UDe La Hoya wavikela isihloko sakhe esilulayo ngokuphindwe kane ngonyaka kwaye wabamba iqela le-International Boxing Federation ngesihloko esilulayo ngoMeyi u-Las Vegas.
NgoFebruwari 18 - uJohane John Molina, eLas Vegas, W 12
Meyi 6 - uRafael Ruelas, eLas Vegas, iTKO 2
Septemba 9 - iGenaro Hernandez, eLas Vegas, iTKO 6
Umhla wama-15 - uJames Leija, eNew York, iTKO 2
I-TKO kaDe La Hoya kaJulio Cesar Chavez yamnika isihloko esiyi-WBC esilula.
NgoJuni 7 - uJulio Cesar Chavez , Las Vegas, TKO 4
Feb. 9 - UDarryl Tyson, eLas Vegas, KO 2
UDe La Hoya wagcina i-WBC ibhanti ephezulu ebomvu kwi-12-round-bout kunye noMiguel Angel Gonzalez ngoJanuwari kwaye ngokuqinisekileyo wavikela isihloko sakhe se-welterweight ngokuchasene nabadlali abahlanu abahlukeneyo ngonyaka.
Jan. 18 - UMiguel Angel Gonzalez, eLas Vegas, W 12
Ngo-Apreli 12 - uPernell Whitaker, eLas Vegas, W 12
NgoJuni 14 - UDavid Kamau, eSan Antonio, eTexas, KO 2
Ngomhla wama-6 - uWilfredo Rivera, i-Atlantic City, eNew Jersey, iTKO 8
"I-Golden Boy" yavikela ibhande layo le-welterweight ngezihlandlo ezine kulo nyaka kwaye ngowama-1999, ngaphambi kokulahlekelwa izihloko ze-WBC ne-IBF kwi-12-round bout ngokumelene noFelix Trinidad ngoSeptemba 1999.
NgoJuni 13 - uPatrick Charpentier, uEl Paso, waseTexas, iTKO 3
Sept. 18 - uJulio Cesar Chavez, Las Vegas, TKO 8
NgoFebruwari 13 - Ike Quartey, eLas Vegas, W 12
Meyi 22 - Oba Carr, Las Vegas, TKO 11
Sept. 18 - Felix Trinidad , Las Vegas, L 12
I-2000s - Iimpawu zokuVikela nokuLahla
Iminyaka elishumi yayingumxube we "Golden Boy" njengoko yalahlekelwa yabuyisa kwakhona izihloko zayo ekupheleni kweminyaka elishumi, ekugqibeleni ilahlekelwa yi-WBC light middleweight belt ku-Floyd Mayweather ngo-2007.
UDe La Hoya walahlekelwa isihloko seWBC se-welterweight kwisibambano se-12-ngo-Juni.
NgoFebruwari 26 - uDerrell Coley, eNew York, KO 7
NgoJuni 17 - uShane Mosley, eLos Angeles, uL 12
U-De La Hoya uzuze isihloko se-WBC esiphezulu se-middleweight title kwi-Juni-round round Juni.
NgoMatshi 24 - uArturo Gatti, eLas Vegas, iTKO 5
NgoJuni 23 - uJavier Castillejo, eLas Vegas, W 12
I-TKO kaFernando Vargas kaDe La Hoya yamvumela ukuba agcine isihloko se-WBC esiphezulu se-middleweight title kwaye aphumelele kwi-World Boxing Association.
Ngonyaka odibeneyo, uDe La Hoya wagcina iziqu zakhe ngo-May kodwa waphonsa iibhande zeWBC kunye ne-WBA kumncintiswano we-12 ngokumalunga noMosley ngoSeptemba.
Ngo-Meyi 3 - uYori Boy Campas, eLas Vegas, iTKO 7
UDe La Hoya uzuze ibhande le-WBO phakathi kweJuni kunye nomxholo wokudibanisa phakathi kweSeptemba, unqamle uBernard Hopkins.
NgoJuni 5 - uFelix Sturm, eLas Vegas, W 12
Sept. 18 - UBernard Hopkins , Las Vegas, KO ngu-9
Emva kokuhlala ngaphandle kuka-2005, uDe La Hoya uzuze umxholo we-WBC ukukhanya phakathi kokuzimela kwakhe ngo-2006.
Meyi 6 - uRicardo Mayorga, Las Vegas, TKO 6
UDe La Hoya walahlekelwa ibhanti ye-WBC yesikhulu esilulayo kulo nyaka. Kuya kuba lixesha lokugqibela eliphethe isihloko.
NgoMeyi 5 - u- Floyd Mayweather Jr , uL 12
"I-Golden Boy" ithatha umhlalaphantsi njengomsebenzi webhokisi lomsebenzi emva kokulahlekelwa nguTKO kuManny Pacquiao ngoDisemba.
Ngo-Meyi 3 - uSteve Forbes, Carson, CA, W 12
Ngomhla wesi-6 - uManny Pacquiao , eLas Vegas, iNV, iTKO ngo-8
Ukunyuka Kwinqanaba le-Weight Class Kungaba ngumdlalo omnandi
UTyson noLee kwiNkulumbuso - Yintoni eya kwenzeka?
UWladimir vs Vitali Klitschko: Bona indlela abazalwana abaya kuxhathisa ngayo
Edwin Valero; Iimpawu zeDynamite
Uhlalutyo lweengxelo ze-E B. White's 'Ring of Time'
Isikhokelo sakho esigqibeleleyo kwi-LEGO TV Iikhathuni
I-Ramayana: I-Epic Tale
Ubomi Bwenene CSI
Ukuvakalisa ubungakanani kwiFrentshi - iZero, Akukho, Akunjalo - Akunjalo
Iimpawu ze-Spiral: I-Starry Snowflakes ye-Cosmos